2:55 AM Interview No comments
इन्टिलेक्चुअल र इन्टेलिजेन्सियाबीच कति फरक छ ? हामीले नेपाली भाषामा यस्ता अवधाराणालाई कसरी बुझ्छौं ?
नेपालको सन्दर्भमा बुद्धिजीवी बनाउने र बौद्धिक बनाउने प्रक्रिया के हो ?
त्यसो भए हाम्रामा बुद्धिजीवी बढी र बौद्धिक कम छन् ?
नेपालका बुद्धिजीवी कन्फर्मिस्ट हुन्छन् र थोरै बौद्धिक जो छन्, ती प्रोग्रेसिभ अर्थात प्रगतिशील छन् ?
बुद्धिजीवीहरुको ठूलो भीड लाग्दै गर्दा बौद्धिकको खडेरी हुनुमा दोष कसको ?
सबै बाहिरबाट विचारहरु सापटी लिएर राजनीतिक पार्टी र शिक्षालयहरु नै बने त यहाँ ?
अर्गानिक ईन्टिलेक्चुअलका बारेमा बेलाबेला हाम्रामा पनि कुराकानी हुन्छ । तर, बुझाइका सिमितता छन् । सजिलो भाषामा अर्गानिक इन्टिलेक्चुअललाई कसरी बुझ्ने ?
त्यस्ता अर्गानिक इन्टिलेक्चुअल अस्तित्व स्वीकार गर्दा खतरा हुन्छ ?
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भ्रातृ संगठनलाई बौद्धिकहरुको संगठन नभनेर बुद्धिजीवी संगठन भनेका छन् ।
त्यसो भए बौद्धिकहरु अराजक हुन्छन् ?
अर्थात बौद्धिकलाई टेम गर्न वा तह लगाउन सकिंदैन ?
यो माया, मोह, स्वार्थ नहुने भनेपछि बौद्धिकलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
बौद्धिक र राज्यको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
राज्यलाई यसै पनि दमनको संयन्त्र भनिन्छ । हाम्रामा सारा विभेदहरुलाई निरन्तरता दिने एजेन्सिका रुपमा राज्य मौजुद छ । अब यस्तो राज्यले बौद्धिकलाई ठाउँ दिने के सम्भावना होला ?
हाम्रा शासकहरुमा यस्ता बौद्धिकहरुको सामना गर्ने सक्ने को थिए ?
प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिबाट सत्तामा पुगेका शासकहरु त आफूलाई कहिल्यै सुरक्षित महसूस गर्न नसक्दा हुन् नी । उनीहरु बौद्धिकसँग संगत गर्न सक्छन् ?
सिंगो मुलुक हाँक्ने राजनीतिक दल र शासकहरु नै बौद्धिक नरुचाउने भएपछि, समाजमा नयाँ विचार हुर्किन पाउने सम्भावना नै न्युन हुने भयो नि ?
परम्परागत रुपमा नै बौद्धिकप्रति हाम्रा शासकहरु नकारात्मक भएकाले हाम्रामा बौद्धिकको खडेरी भएको जस्तो बुझियो ।
हाम्रो औपचारिक शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको बौद्धिक बन्ने सम्भावनालाई प्रश्रय दिन्छ कि त्यस्तो सम्भावनाको अन्त गर्छ ?
यो परिवर्तन नआउनुको कारण चाहिं अहिलेको बजारमा पनि यस्तै पद्धति काम लाग्दो भएर हो ?
अब हाम्रो लेखनको कुरा गरौं । हाम्रामा यत्रा धेरै किताब लेख्ने त बौद्धिक होइन बरु बुद्धिजीवि मात्रै रहेछन्, होइन ?
हाम्रो लेखनको यस्तो परम्परा कसरी स्थापित भयो होला ?
जातीय संरचनाले बौद्धिक अभ्यास हुन कसरी नदिएको हो ?
तर, अहिलेका राजनीतिक परिवर्तनले लेखनमा परिवर्तन ल्याएको छ । विद्रोहको स्वर सुनिन्छ । शोषण र अलगाव भोगेका मधेसी, जनजाती पात्रहरुलाई पनि शक्तिशाली बनाएर लेखिने क्रम त सुरु भएको छ त ?
विकासको प्रचलित अवधारणा र विकासका लागि आएका वैदेशिक सहयोगले बौद्धिक विकासमा चाहिं सहयोग गरेको छ वा छैन ?
हामीले बजार, विकासे गतिविधि, शिक्षा प्रणाली, लेखन, शासन प्रणाली सबैबारे केही कुराकानी गर्यौं । यी सबैको अवस्था हेर्दा, हाम्रो सिंगो समाजले बौद्धिक निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई प्रश्रय दिएको देखिएन ।
(First Published in Record Nepal on 15 Poush, 2071)